I-Getaway Flat eStylish kwilali yaseFife Coastal
Enye yeeholide zethu ezi-3 'eziStylish Fife Holiday Lets'-iWoodside yindawo epholileyo ekumgangatho ophantsi kwilali entle yokuloba yaseFife eWest Wemyss. Ngomnyango wabucala kunye nebhokisi yokutshixa, eyakho igadi, ukuhamba elunxwemeni kunye nomoya omtsha le yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka!
IWoodside sisiseko 'sekhaya elisuka ekhaya' sakho esineebhodi zomgangatho ezikhutshiweyo kunye neeragi zoboya, le flethi yomgangatho ophantsi inesitayile kwaye imnandi. Ivakala ngathi yindlwana kuneflethi!
Igumbi lokuhlala linesofa ecofa ngokucofa i-sofa yondwendwe olongezelelweyo (iguqula ibe yibhedi - umatrasi, ibhedi kunye neetawuli zibonelelwe). Kukho isofa etofotofo kunye nesitulo sengalo, itafile encinci yesidlo sangokuhlwa, igcwele ngokupheleleyo iincwadi ezininzi, iijigsaw kunye nemidlalo yebhodi. Indawo yomlilo ngoku ayisetyenziselwa umlilo wokwenyani kodwa kukho ingqokelela yamakhandlela eentsika ahleli eziko ukuze ube namava okukhanya okuthandekayo kothando!
Licala lolwandle lakudala 'suka kulo lonke caba'. Qaphela ukuba kwisakhiwo esidala kukho iibhodi eziphantsi ezitswinayo kunye neefestile zesash kunye neefestile ... yonke inxalenye yomtsalane!
Ikwilali encinci yolondolozo (izitrato nje ezi-2) ephuma kumkhondo. Uya kuziva ngathi ubuyile umva ngexesha! IWoodside ibekwe kude kwisitrato esincinci sokuhlala esibizwa ngokuba yiChurch Street ehleli phezulu kweWest Wemyss. Nceda uqaphele, ngeenjongo zokuchaneka ukuba iWoodside ayinazo iimbono zolwandle. Nangona kunjalo, ulwandle ngokwalo luyimizuzu emi-2 nje ukuhamba udlula elalini. Ngoko awukho kude!
Kwindawo yokuhlala kukho iTV encinci enazo zonke iindlela zokujonga simahla. Kukho unomathotholo wedijithali oneCD player & ingqokelela enkulu yeeCD onokuthi uyidlale. Kukho ukhetho oluhle kakhulu lweencwadi, imidlalo kunye neejigsaws.
Kukho kwakhona i-Wi-fi engenamkhawulo oyisebenzisayo. Nceda uqaphele ukuba le yilali encinci engekabinayo iFibre! Ihlala yanele ukusebenza okusisiseko & ukusasaza kodwa akukho nto ikhawulezayo ngokukhawuleza njengezantya zesixeko - ungalindela i-10MB - 12MB njenge-avareji. Nangona i-intanethi kwilali iphela inokuphazamiseka, ngoko inokwehla kwaye iphume ngexesha lokuhlala kwakho. Ayiqhelekanga umcimbi ukuba useholideyini! Kodwa ayifanelekanga ngokwenene ukusebenza.
Le flethi inegumbi lokulala elitsha neliqaqambileyo elinezitshixo zezityalo zobumfihlo kunye newodrophu, isifuba sedrowa kunye netafile yokunxiba yokugcina.
Inekhitshi enelanga kunye nekhanyayo ekhululekileyo e-oki eqinileyo enemibono ngaphandle kwegadi evalwe ngokupheleleyo. Igcwele kakuhle izixhobo zasekhitshini kwaye inomatshini omtsha wokuhlamba, ifriji (enegumbi elincinci lefriji), i-oveni kunye nemicrowave. Kukho indawo yebar yesidlo sakusasa enezitulo zebar, eyona ndawo ithandekayo yokufumana isidlo sakusasa.
Kukho igumbi lokuhlambela elinelanga & eliqaqambileyo elineshawari enkulu ebiyelwe ngokupheleleyo. I-shampoo kunye nesepha zinikezelwa kunye neetawuli.
Umyezo unendawo egangathiweyo yokuhlala ngaphandle kwaye ujabulele ukucula kweentaka (kukho ii-squirrels kwimithi ejikelezileyo ukuba uyibukele) kunye nendawo yengca yombhoxo wepikiniki!
IWoodside ibekwe kude kwisitrato esincinci sokuhlala esibizwa ngokuba yiChurch Street phezulu kweWest Wemyss. Ulwandle ngokwalo luyimizuzu emi-2 nje ukuhamba udlula elalini. Nceda uqaphele ukuba iWoodside ayinazo iimbono zolwandle. Nangona kunjalo ineembono zegadi ukusuka ekhitshini.
Ilali kunye nommandla ojikelezileyo yindawo yokuhlala yezilwanyana zasendle, kubandakanya nekoloni yabahlali. Iiganethi kunye ne-arctic tern ezisuka kwiBass Rock zinokujongwa zisitya kufutshane neWest Wemyss kwiinyanga zasehlotyeni kwaye amahlengesi nawo abandwendweli rhoqo. Indlela entle yoNxweme lweFife ihamba phakathi kweWest Wemyss, abahambi abazimiseleyo banokuthatha umgama oqhubekayo weemayile ezili-117 ukunqumla unxweme olunesanti kunye neendlela eziselunxwemeni okanye banokuhamba amacandelo amancinci ayo! Iinkcukacha zeFife Costal Walk zinokufumaneka kwifolda yeendwendwe kwiflethi kunye nezinye iingcebiso ezininzi zokuhamba.
Kukho inani elikhulu leendawo zegalufa zasekhaya kulo mmandla ukongeza kuninzi lwezifundo eSt Andrews, ikhaya legalufa.
Izibuko elikufutshane le-Dysart likumgama wokuhamba kwaye lalisetyenziswa kumboniso bhanyabhanya we-Outlander. Kukho indlu yeHarbour Masters eDysart apho uya kufumana isuphu kunye nesandwich, ulwazi oluninzi malunga ne-Outlander kunye neCoastal Walk.
I-West Wemyss ine-pub eqhuba uluntu evula ubusuku obu-3 ngeveki. Ngaba ungene. Sonke sinobubele kwaye yindlela elungileyo yokufumanisa ngobomi basezilalini. Ngamanye amaxesha kubakho umculo ophilayo kwaye kuhlala kukho ukhuphiswano lwedomino!
Kukwakho necafe encinci eWest Wemyss enika ikofu kunye nekeyiki kunye nokutya okushushu evula ngolwesiHlanu - ngeCawa. Uqinisekisiwe ukuba wamkelekile ngokufudumeleyo.
Uya kufumana iziko elincinci lelifa kwidolophana kwaye uTam osebenza apho uya kuvuya kakhulu ukukuxelela ngembali ecebileyo yendawo yendawo ... ingasathethi ke imiqolomba edumileyo ye-Wemyss.
Ndihlala kwisitrato esinye neWoodside ngoko ndihlala ndikhona ukuze ndincede, nangona ndiza kukushiya unoxolo uyonwabele iholide yakho!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- West Wemyss